September 23, 2021 – Shwe Myanmar
အရမ်းကောင်းလွန်းလို့မျှဝေပါရစေ.. ကျမနှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းမှာ ထိပ်ခပ်နာဖြစ်တာပါ
ဒီရောဂါဖြစ်ဖူးတဲ့အမေတစ်ယောက်ကပြောလို့ အဲ့အရွက်(မရိုးရွက်)ကို ကျမကတော့ခြောက်အောင်မစောင့်နိုင်လို့အစိုအတိုင်းပဲလိပ်ပြီး မီးရှို့ပြီးရှူပါတယ်ဒီနေ့နဲ့ဆို၅ရက်ရှိပါပြီ
ယခုပုံမွာ မြင်နေရတဲ့အပင်ဟာ မုရိုးပင်(မရိုးပင်၊ ငဖြူကြီးပင်၊ ကျွဲနုပေါင်ပင်) ဖြစ်ပါတယ်။ မုရိုးပင်ဟာ ဆေးဖက်ဝင်သည့် အပင်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ဆီးလွယ်သူများနှင့် ဆီးမ်ား၍ ခဏခဏသွားနေရလို့ စိတ်ညစ်နေသူများသည် မုရိုးပွင့်များကို ပြုတ်၍ သုပ္စား၊ တို့စားပါက ဆီးကို ပြန်ချုပ်စေပါသည်။
(၂) မုရိုးရွက်များကို နေရိပ်တွင် အခြာက်ခံ၍ လက်ဖက်ခြောက်ကဲ့သို့ ရေနွေးထဲ ခတ်သောက်လျှင် ဆီးချုပ်စေပါသည်။
(၃) ကျွဲ၊ နွားများ ခွါနာလျှာနာဖြစ်လျှင် မုရိုးရွက်ကို ကြိတ်၍ ကုသပေးနိုင်ပါသည်။
(၄) ပဲစင်းငုံများကို ပိုးမဝင်အောင် မုရိုးပင်၏ အရွက်များဖြင့် အုပ္ထားပါက ပိုးကောင်းများ ပြေးပါသည်။
(၅) မုရိုးရွက်ကို မီးကင်၍ အရည်ညစ်ယူကာ ရှူပေးလျှင် ထိပ်ခပ်နာရောဂါကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
စောနွဲ့နေဆိုင် (ပူတာအို) ကျမ်းကိုး ။ ။ ရိုးရာဆေးမြီးတိုများ
အရမျးကောငျးလှနျးလို့မြှဝပေါရစေ.. ကမြနှာခေါငျးအတှငျးပိုငျးမှာ ထိပျခပျနာဖွဈတာပါ
ဒီရောဂါဖွဈဖူးတဲ့အမတေဈယောကျကပွောလို့ အဲ့အရှကျ(မရိုးရှကျ)ကို ကမြကတော့ခွောကျအောငျမစောငျ့နိုငျလို့အစိုအတိုငျးပဲလိပျပွီး မီးရှို့ပွီးရှူပါတယျဒီနနေဲ့ဆို၅ရကျရှိပါပွီ
ယခုပုံမှာ မွငျနရေတဲ့အပငျဟာ မုရိုးပငျ(မရိုးပငျ၊ ငဖွူကွီးပငျ၊ ကြှဲနုပေါငျပငျ) ဖွဈပါတယျ။ မုရိုးပငျဟာ ဆေးဖကျဝငျသညျ့ အပငျတဈမြိုး ဖွဈပါတယျ။
(၁) ဆီးလှယျသူမြားနှငျ့ ဆီးများ၍ ခဏခဏသှားနရေလို့ စိတျညဈနသေူမြားသညျ မုရိုးပှငျ့မြားကို ပွုတျ၍ သုပ်စား၊ တို့စားပါက ဆီးကို ပွနျခြုပျစပေါသညျ။
(၂) မုရိုးရှကျမြားကို နရေိပျတှငျ အခွာကျခံ၍ လကျဖကျခွောကျကဲ့သို့ ရနှေေးထဲ ခတျသောကျလြှငျ ဆီးခြုပျစပေါသညျ။
(၃) ကြှဲ၊ နှားမြား ခှါနာလြှာနာဖွဈလြှငျ မုရိုးရှကျကို ကွိတျ၍ ကုသပေးနိုငျပါသညျ။
(၄) ပဲစငျးငုံမြားကို ပိုးမဝငျအောငျ မုရိုးပငျ၏ အရှကျမြားဖွငျ့ အုပ်ထားပါက ပိုးကောငျးမြား ပွေးပါသညျ။
(၅) မုရိုးရှကျကို မီးကငျ၍ အရညျညဈယူကာ ရှူပေးလြှငျ ထိပျခပျနာရောဂါကို သကျသာပြောကျကငျးစပေါသညျ။
စောနှဲ့နဆေိုငျ (ပူတာအို) ကမျြးကိုး ။ ။ ရိုးရာဆေးမွီးတိုမြား
တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးပညာဟာ အာရှသာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ပါ ကျော်ကြားပါတယ်။ တရုတ်ရိုးရာအပ်စိုက်ကုပညာက ကျန်းမာရေးအတွက်များစွာ အကျိူးရှိစေသော်လည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ရှိမှသာလျှင် ကုသမှုခံယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု ဖော်ပြမယ့်နည်းကတော့ ဘာကိရိယာမှမလို မည်သူ့အကူအညီမှမလိုပဲ ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းများကို သက်သာစေမယ့် တရုတ်ဆေးပညာရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ယခုဖော်ပြမယ့် လက်ဖဝါးပေါ်ရှိနေရာများကို ၂မိနစ်ခန့် နှိပ်နယ်ပေးရုံဖြင့် နာကျင်ခြင်းများကို သက်သာစေမှာပါ
-အစာအိမ်၊အူလမ်းကြောင်းနာကျင်ခြင်းကို သက်သာစေပြီး အစာကြေစေပါတယ်။
-လက်မောင်း၊ကျောနှစ်ဖက်ရှိ နာကျင်ခြင်းများကို သက်သာစေပါတယ်
ကြက်ဆူဆီကို ဂုတ်ပေါ်တွင်လိမ်းပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။ အယောင်ကျဖို့အတွက်ရေခဲကပ်ပေးနိုင်ပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းစေဖို့ ရေနွေးအိတ်ကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Tai Chong point လိုခေါ့်သော ခြေမနဲ့ခြေညိုးအောက်ဘက် လက်၂လုံးအကွာတွင်ရှိသောနေရာကို ၂မိနစ်ခန့် ဖိပါ။ နာကျင်ခြင်းများသက်သာလာတာကို တွေ့ရပါမယ်။
Bonus အနေနဲ့ သင်စိတ်တိုခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ပူပန်ခြင်းကို ခံစားရသောအခါ လက်ခလယ်ကို တင်းကျပ်စွာစုပ်ကိူင်ပေးခြင်းဖြင့် စိတ်သောကများ လျော့ပါးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတျတိုငျးရငျးဆေးပညာဟာ အာရှသာမက တဈကမ်ဘာလုံးတှငျပါ ကြျောကွားပါတယျ။ တရုတျရိုးရာအပျစိုကျကုပညာက ကနျြးမာရေးအတှကျမြားစှာ အကြိူးရှိစသေျောလညျး ကြှမျးကငျြတဲ့ပညာရှငျရှိမှသာလြှငျ ကုသမှုခံယူနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ယခု ဖျောပွမယျ့နညျးကတော့ ဘာကိရိယာမှမလို မညျသူ့အကူအညီမှမလိုပဲ ကွှကျသားနာကငျြခွငျးမြားကို သကျသာစမေယျ့ တရုတျဆေးပညာရပျ ဖွဈပါတယျ။ယခုဖျောပွမယျ့ လကျဖဝါးပျေါရှိနရောမြားကို ၂မိနဈခနျ့ နှိပျနယျပေးရုံဖွငျ့ နာကငျြခွငျးမြားကို သကျသာစမှောပါ
-အစာအိမျ၊အူလမျးကွောငျးနာကငျြခွငျးကို သကျသာစပွေီး အစာကွစေပေါတယျ။
-လကျမောငျး၊ကြောနှဈဖကျရှိ နာကငျြခွငျးမြားကို သကျသာစပေါတယျ
ကွကျဆူဆီကို ဂုတျပျေါတှငျလိမျးပွီး နှိပျနယျပေးပါ။ အယောငျကဖြို့အတှကျရခေဲကပျပေးနိုငျပွီး သှေးလှညျ့ပတျမှုကောငျးစဖေို့ ရနှေေးအိတျကပျပေးနိုငျပါတယျ။
Tai Chong point လိုခေျါ့သော ခွမေနဲ့ခွညေိုးအောကျဘကျ လကျ၂လုံးအကှာတှငျရှိသောနရောကို ၂မိနဈခနျ့ ဖိပါ။ နာကငျြခွငျးမြားသကျသာလာတာကို တှရေ့ပါမယျ။
Bonus အနနေဲ့ သငျစိတျတိုခွငျး သို့မဟုတျ စိတျပူပနျခွငျးကို ခံစားရသောအခါ လကျခလယျကို တငျးကပျြစှာစုပျကိူငျပေးခွငျးဖွငျ့ စိတျသောကမြား လြော့ပါးလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
” အသက်” လေးရယ်ရှည်စေလို မန်းတောင်ရိပ်ခိုတဲ့ အဲဒါသီချင်းပါ တကယ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်က ဒီလိုပါ။
ငှက်ပျောဖီးကြမ်း အမှည့်ကို အခွန်ပါအပါ ရေစင်အောင်ဆေး လိုက်ပါ။
ပြီရင် ဓား ထက်ထက်နဲ သင်တော်သလောက် ခပ်ပါးပါးလှီးပါ။ နေပူမှာ
ဖန့်ရုံလေးလှမ်းပီး မြေအိုး အသစ်ထည်းကို စီပီးထည်ပါ။
ပြီးသွားရင်တော့ ပျားရည် စစ်စစ်ကို ထိုလှီးထည့်ထားသော ငှက်ပျောသီးအဖတ်လေးတွေအပေါ် မြုတ်တဲအထိ လောင်းထည့်ပြီး အဖုံးလုံအောင် ပြန်ပိတ်ပြီးထားပါ။
တပတ်လောက် ကြာသည်အထိ နေရောင်ရှိသောနေမှာ ထားပြီး နေစဉ် တနေ့ နစ်ဖတ် သုံးဖတ် မှီဝဲနိုင်ပါပြီး။
တကယ်ကို အသက်ရှည် ကျမ်းမာဆေးပါပဲ။ အသက်ရှည်နေတိုင်းလည်း ကျမ်းမာရေက မကောင်းမွန်နေကြဘူးမို့လား။
ဒီအတိုင်းသာ မိမိရဲ အဖိုးအဖွား မိဘ လူကြီး လူငယ် မရွေး သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ရေမီးအစုံနဲ မြေကြီးတုံ အောင် ခုန်ပျံ ကျော်လွား နိုင်တဲ အသက် ၉၀ ကျော် အဖိုးအိုရဲ သက်ရှည်ကျမ်းမာ လက်ဆွဲသုံးခဲတဲ ဆေးနည်းလေပါတဲဗျာ။
” အသကျ” လေးရယျရှညျစလေို မနျးတောငျရိပျခိုတဲ့ အဲဒါသီခငျြးပါ တကယျမဟုတျပါဘူးတကယျက ဒီလိုပါ။
ငှကျပြောဖီးကွမျး အမှညျ့ကို အခှနျပါအပါ ရစေငျအောငျဆေး လိုကျပါ။
ပွီရငျ ဓား ထကျထကျနဲ သငျတျောသလောကျ ခပျပါးပါးလှီးပါ။ နပေူမှာ
ဖနျ့ရုံလေးလှမျးပီး မွအေိုး အသဈထညျးကို စီပီးထညျပါ။
ပွီးသှားရငျတော့ ပြားရညျ စဈစဈကို ထိုလှီးထညျ့ထားသော ငှကျပြောသီးအဖတျလေးတှအေပျေါ မွုတျတဲအထိ လောငျးထညျ့ပွီး အဖုံးလုံအောငျ ပွနျပိတျပွီးထားပါ။
တပတျလောကျ ကွာသညျအထိ နရေောငျရှိသောနမှော ထားပွီး နစေဉျ တနေ့ နဈဖတျ သုံးဖတျ မှီဝဲနိုငျပါပွီး။
တကယျကို အသကျရှညျ ကမျြးမာဆေးပါပဲ။ အသကျရှညျနတေိုငျးလညျး ကမျြးမာရကေ မကောငျးမှနျနကွေဘူးမို့လား။
ဒီအတိုငျးသာ မိမိရဲ အဖိုးအဖှား မိဘ လူကွီး လူငယျ မရှေး သုံးဆောငျနိုငျပါတယျ။
ရမေီးအစုံနဲ မွကွေီးတုံ အောငျ ခုနျပြံ ကြျောလှား နိုငျတဲ အသကျ ၉၀ ကြျော အဖိုးအိုရဲ သကျရှညျကမျြးမာ လကျဆှဲသုံးခဲတဲ ဆေးနညျးလပေါတဲဗြာ။
ဩစတြေးလျှနိုင်ငံ ကမ်းခြေအချို့ရှိ သဲသောင်ပြင်များပေါ်တွင် တက်လာသည့် ဂျယ်လီနှင့် တူသော အိတ်များကို မဖျက်ဆီး မိအောင် သတိပြုရန်နှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော လခြမ်းပုံစံ ပုံသဏ္ဍာန် ကလေးများထဲတွင် သားလောင်းများ ထောင်နှင့် ချီကာ ပါရှိနေပြီး ထိခိုက်မိလျှင် အလွန်ပြိုကွဲ သွားနိုင်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။
လူအများစုက သူတို့ကို ဂျယ်လီငါးဟု ထင်ကြသော်လည်း အမှန် တကယ်တွင် သဲခရု များ၏ ဥအိတ်များ ဖြစ်နေသည်။ သူတို့သည် နွေဦးရာသီတွင် ကမ်းခြေများ၌ စတင်တွေ့ရပြီး ယေဘုယျ အားဖြင့် မတ်လအထိ တွေ့ရတတ်သည် ။ အွန်လိုင်း စာမျက်နှာများတွင် ဂျယ်လီငါး အဖြစ် မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြခဲ့သည်။
သဲခရုများ၏ ဥ အိတ်များသည် အရှည် ၅ စင်တီမီတာခန့်ရှိပြီး ၁၀ စင်တီမီ တာ အထိလည်း တွေ့ရတတ်သည်။ အလေးချိန် အားဖြင့် ၂၀၀ ဂရမ်မျှ လေးသည်။ခရုအမ များသည် ညဥ့်အခါ၌ ဥများကို ဥချကြပြီး ချွဲနှင့်သဲ ပေါင်းစပ်ကာ ဆွဲထားသော မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုတွင် တန်းစီ ဥထားခဲ့သည်။ ဥအိတ် တစ်အိတ်လျှင် ခရုဥပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်သည်။
ဥအိတ်သည် ရက်အနည်းငယ် အကြာတွင် ရေထဲကျသွားပြီးနောက် ဥများမှ သန္ဓေသားလောင်းကို မွေးထုတ်ပေးလိုက်လေသည်။CSIRO ဝက်ဘ်ဆိုက်က “ အကယ်၍ သင်ရှာတွေ့ခဲ့လျှင် အချင်းချင်း ပစ်ပေါက် ကစားခြင်း မပြုရန်နှင့် ရေထဲသို့ ညင်သာစွာ ပြန်ထည့်ထားပေးရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
ဩစတွေးလြှနိုငျငံ ကမျးခွအေခြို့ရှိ သဲသောငျပွငျမြားပျေါတှငျ တကျလာသညျ့ ဂယျြလီနှငျ့ တူသော အိတျမြားကို မဖကျြဆီး မိအောငျ သတိပွုရနျနှငျ့ ပုံမှနျမဟုတျသော လခွမျးပုံစံ ပုံသဏ်ဍာနျ ကလေးမြားထဲတှငျ သားလောငျးမြား ထောငျနှငျ့ ခြီကာ ပါရှိနပွေီး ထိခိုကျမိလြှငျ အလှနျပွိုကှဲ သှားနိုငျကွောငျး သတိပေးထားသညျ။
လူအမြားစုက သူတို့ကို ဂယျြလီငါးဟု ထငျကွသျောလညျး အမှနျ တကယျတှငျ သဲခရု မြား၏ ဥအိတျမြား ဖွဈနသေညျ။ သူတို့သညျ နှဦေးရာသီတှငျ ကမျးခွမြေား၌ စတငျတှရေ့ပွီး ယဘေုယြ အားဖွငျ့ မတျလအထိ တှရေ့တတျသညျ ။ အှနျလိုငျး စာမကျြနှာမြားတှငျ ဂယျြလီငါး အဖွဈ မှားယှငျးစှာ ဖျောပွခဲ့သညျ။
သဲခရုမြား၏ ဥ အိတျမြားသညျ အရှညျ ၅ စငျတီမီတာခနျ့ရှိပွီး ၁၀ စငျတီမီ တာ အထိလညျး တှရေ့တတျသညျ။ အလေးခြိနျ အားဖွငျ့ ၂၀၀ ဂရမျမြှ လေးသညျ။ခရုအမ မြားသညျ ညဉျ့အခါ၌ ဥမြားကို ဥခကြွပွီး ခြှဲနှငျ့သဲ ပေါငျးစပျကာ ဆှဲထားသော မဉျြးကွောငျးတဈခုတှငျ တနျးစီ ဥထားခဲ့သညျ။ ဥအိတျ တဈအိတျလြှငျ ခရုဥပေါငျး ထောငျပေါငျးမြားစှာ ပါဝငျသညျ။
ဥအိတျသညျ ရကျအနညျးငယျ အကွာတှငျ ရထေဲကသြှားပွီးနောကျ ဥမြားမှ သန်ဓသေားလောငျးကို မှေးထုတျပေးလိုကျလသေညျ။CSIRO ဝကျဘျဆိုကျက “ အကယျ၍ သငျရှာတှခေဲ့လြှငျ အခငျြးခငျြး ပဈပေါကျ ကစားခွငျး မပွုရနျနှငျ့ ရထေဲသို့ ညငျသာစှာ ပွနျထညျ့ထားပေးရနျ တိုကျတှနျးထားသညျ။
ရေဖျဉ်းရောဂါ နှင့်ပတ်သက်၍ဆေးနည်းအမျိုးမျိုး ကုနည်းအဖုံဖုံရှိကြပါသည်။ ရောဂါတစ်ခုကို ကုသမည်ဟု လေ့လာလိုက်လျှင် ရောဂါတစ်ခုအတွက် ဆေးနည်း(၁၀၀)မက ရှိနိုင်ပါသည်။
အကြောင်းမှာ လူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ရုပ်ခံဓာတ်ခံချင်း မတူသလို ရောဂါဖြစ်ပုံက အပူ၊အအေး၊ အပိန်၊ အဝ မှစပြီး ဓာတ်ချက်လက္ခဏာများ မတူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးတစ်ခုကို သုံးကြည့်၍ ကိုယ်မပျောက်တိုင်း ဆေးမကောင်းပါဘူးကွာ။ အလကားပါကွာလို့ မယူဆအပ်။ ကိုယ်နှင့်မပျောက်ပေမယ့် သူနှင့်ပျောက်နိုင်ပါသည်။
ယခုဖော်ပြမည့်ဆေးနည်း၂ မျိုးမှာလည်း လူတိုင်းပျောက်ကင်းနိုင်မည်ဟု အာမခံ၍မရပါ။ သို့သော်— သို့သော် လက်တွေ့ သုံးကြည့်ဖူးသည်က တကြောင်း။ မိတ်ဆွေဆရာများ ကုသအောင်မြင်နေသည်ကိုလည်း လက်တွေ့မြင်ဖူး ကြုံဖူးသော ဆေးနည်းဖြစ်ခြင်းအတွက်
တိုက်ဆိုင်သူများအတွက် ကယ်တင်ရာရောက်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ အနည်းဆုံးလူ ၁၀ ယောက်မှာ ရယောက်လောက်တော့ အဆင်ပြေသက်သာ ပျောက်ကင်းကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ (လက်တွေ့)
၁။ ပေပင်၏ အရွက်အခက် အရိုးတံပါ မကျန်ယူ၍ နာနာညှစ်သော် သတ္ထုရည်ရပါလိမ့်မည်။ပေရွက် သတ္ထုရည် ၁၀ သားတွင်။ ယမ်းစိမ်း ၅ မူးသား ထည့်ပါ။ ထိုဆေးနှစ်ခုကို ဖျော်၍ တစ်နေ့ ၃ကြိမ် ဟင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းခန့်စီ သောက်ပေးပါ။ ၃ပါတ်အတွင်း လက်တွေ့သက်သာ လာပါလိမ့်မည်။အမြစ်ပြတ်အောင်ဆက်လက်၍သောက်ပါ။ ယမ်းစိမ်းနေရာတွင် ယမ်းတေဇောငြိမ်း ထည့်နိုင်လျှင် သာ၍ထက်ပါသည်။
၂။ ဇော်ဂျီခါး ပုံစ (ခေါ်) သစ်ကပ်ပင်တစ်မျိူးအား ရေနွေးဖျော၍ မကျည်းသီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ကြက်သွန်ဖြူတို့ဖြင့် သုပ်၍စားပါ။ ၃ပါတ်အတွင်း သက်သာလာပါလိမ့်မည်။(လက်တွေ့) ဤ ၂ နည်းဖြင့် သုံးစွဲကြည့်ကြပါ။ လူတိုင်းမဟုတ်ရင်တောင် လူအများစု လက်တွေ့ သက်သာပျောက်ကင်း ကြပါလိမ့်မယ်။ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သုံးစွဲကြည့်ပါ။အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ။ မူရင်းခရက်ဒစ်
ရဖေဉျြးရောဂါ နှငျ့ပတျသကျ၍ဆေးနညျးအမြိုးမြိုး ကုနညျးအဖုံဖုံရှိကွပါသညျ။ ရောဂါတဈခုကို ကုသမညျဟု လလေ့ာလိုကျလြှငျ ရောဂါတဈခုအတှကျ ဆေးနညျး(၁၀၀)မက ရှိနိုငျပါသညျ။
အကွောငျးမှာ လူတဈယောကျနှငျ့တဈယောကျ ရုပျခံဓာတျခံခငျြး မတူသလို ရောဂါဖွဈပုံက အပူ၊အအေး၊ အပိနျ၊ အဝ မှစပွီး ဓာတျခကျြလက်ခဏာမြား မတူခွငျးကွောငျ့ဖွဈကွောငျး လလေ့ာတှရှေိ့ရသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဆေးတဈခုကို သုံးကွညျ့၍ ကိုယျမပြောကျတိုငျး ဆေးမကောငျးပါဘူးကှာ။ အလကားပါကှာလို့ မယူဆအပျ။ ကိုယျနှငျ့မပြောကျပမေယျ့ သူနှငျ့ပြောကျနိုငျပါသညျ။
ယခုဖျောပွမညျ့ဆေးနညျး၂ မြိုးမှာလညျး လူတိုငျးပြောကျကငျးနိုငျမညျဟု အာမခံ၍မရပါ။ သို့သျော— သို့သျော လကျတှေ့ သုံးကွညျ့ဖူးသညျက တကွောငျး။ မိတျဆှဆေရာမြား ကုသအောငျမွငျနသေညျကိုလညျး လကျတှမွေ့ငျဖူး ကွုံဖူးသော ဆေးနညျးဖွဈခွငျးအတှကျ
တိုကျဆိုငျသူမြားအတှကျ ကယျတငျရာရောကျအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျပါသညျ။ အနညျးဆုံးလူ ၁၀ ယောကျမှာ ရယောကျလောကျတော့ အဆငျပွသေကျသာ ပြောကျကငျးကွသညျကိုတှရေ့ပါသညျ။ (လကျတှေ့)
၁။ ပပေငျ၏ အရှကျအခကျ အရိုးတံပါ မကနျြယူ၍ နာနာညှဈသျော သတ်ထုရညျရပါလိမျ့မညျ။ပရှေကျ သတ်ထုရညျ ၁၀ သားတှငျ။ ယမျးစိမျး ၅ မူးသား ထညျ့ပါ။ ထိုဆေးနှဈခုကို ဖြျော၍ တဈနေ့ ၃ကွိမျ ဟငျးစားဇှနျး ၁ ဇှနျးခနျ့စီ သောကျပေးပါ။ ၃ပါတျအတှငျး လကျတှသေ့ကျသာ လာပါလိမျ့မညျ။
အမွဈပွတျအောငျဆကျလကျ၍သောကျပါ။ ယမျးစိမျးနရောတှငျ ယမျးတဇေောငွိမျး ထညျ့နိုငျလြှငျ သာ၍ထကျပါသညျ။
၂။ ဇျောဂြီခါး ပုံစ (ချေါ) သဈကပျပငျတဈမြိူးအား ရနှေေးဖြော၍ မကညျြးသီး၊ ကွကျသှနျနီ၊ကွကျသှနျဖွူတို့ဖွငျ့ သုပျ၍စားပါ။ ၃ပါတျအတှငျး သကျသာလာပါလိမျ့မညျ။(လကျတှေ့)ဤ ၂ နညျးဖွငျ့ သုံးစှဲကွညျ့ကွပါ။ လူတိုငျးမဟုတျရငျတောငျ လူအမြားစု လကျတှေ့ သကျသာပြောကျကငျး ကွပါလိမျ့မယျ။ အန်တရာယျကငျးရှငျးစှာ သုံးစှဲကွညျ့ပါ။အားလုံး ကနျြးမာကွပါစေ။ မူရငျးခရကျဒဈ
“သငျ့အိမျမှာ ငှကျပြောပငျရှိတယျဆိုရငျ ထသာခုနျလိုကျတော့”
သင်ထင်မထားတဲ့ ငှက်ပျောရွက်ရဲ့ အကျိုးအာနိသင်
ငှက်ပျောရွက်က စားစရာတစ်ခုမဟုတ်သလို ဆေးဖက်ဝင်မယ်လို့လည်း ဘယ်သူမှထင်ထားလောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထုပ်ပိုးမှုအတွက် သုံးတာကလွဲလို့ ငှက်ပျောရွက်ကို စားဖို့ ဒါမှမဟုတ် ဆေးဖက်ဝင်တဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုလို့ရမယ်ရယ်လို့ ထင်မထားဘူးဟုတ်။
ငှက်ပျောရွက်ကို လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ရင်ကြပ်ချောင်းဆိုးသက်သာစေဖို့အတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။ လေ့လာမှုတွေအရ ငှက်ပျောရွက်ဟာ ကိုယ်ခံအားကိုတိုးစေနိုင်သလို၊ ချေင်းဆိုးသက်သာစေပြီး နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း အထက်ပိုင်းမှာရောဂါပိုးတွေ ဝင်ရောက်ကူးစက်တာကိုလည်း အထိရောက်ဆုံး သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အအေးမိဖျားနာတာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ချွဲတွေကိုပျော်စေနိုင်ပြီး လည်ချောင်း ယားယံခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ငှက်ပျောရွက်ကို အရည်ညှစ်ပြီး ရေနဲ့ရောလို့ ၁၀ မိနစ်လောက်ကျိုပေးပါ။ ပြီးရင်ပျားရည်လေးနဲ့ရောပြီး သောက်ပေးလို့ရပါတယ်။
သင်မှာ နာတာရှည်ချောင်းဆိုးကြောင့် လေပြွန်ရောင်ရမ်းနာများရှိမယ်ဆိုရင် သဘာဝဆေးအနေနဲ့ ငှက်ပျောရွက်ကို အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လေပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုသာမကဘဲ ချွဲကျပ်ပြီး ဆိုးတဲ့ချောင်းကိုပါ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ polysaccharides ဒြပ်ပေါင်းပါဝင်နေတာကြောင့် ချွဲဖြစ်ပြီး ချောင်းဆိုးတာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ချောင်းခြောက်ဆိုးတာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ငှက်ပျောရွက်ကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ရေနွေးထဲမှာ ၁၀ မိနစ်ကနေ ၁၅ မိနစ်လောက်စိမ်လို့ ပေါင်းခံရည်ယူပါ။ ပြီးရင်စိမ်ထားတဲ့အရည်ကိုသောက်ပေးပါ။ တစ်နေ့ကို ၃ ခွက်လောက်အထိသောက်ပေးလို့ရပါတယ်။
အရေပြား ယားယံတာကို သက်သာစေနိုင်တယ်-
အရေပြားမှာ ရောင်ရမ်းတာ၊ ယားယံတာ နဲ့ နာကျင်တာတွေသက်သာစေဖို့အတွက်လည်း ငှက်ပျောရွက်ကို အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။ ငှက်ပျောရွက်မှာ အရေပြားကို ယားယံမှုသက်သာစေပြီး အသားအရေချောမွေ့လို့ ကျန်းမာတဲ့ အရေပြားတစ်ရှုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ allantoin ဒြပ်ပေါင်းကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပါတယ်။ နေလောင်ဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို ဝက်ခြံတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေကို ကြည်လင်စေနိုင်ပါတယ်။ငှက်ပျောရွက်ကိုစင်အောင်ဆေး အရည်ညှစ်ပြီး အရေပြားမှာ စွတ်ပေးရုံပါ။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေအတွက်လည်း ငှက်ပျောရွက်ကို အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။ အနာကျက်စေနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိနေပါတယ်။ allantoin ပါဝင်တဲ့အတွက် အနာကျက်စေနိုင်ပြီး အသေးစားပြတ်ရှဒဏ်ရာ၊ အနာ၊ ပျားတုပ်တာ၊ ပိုးကောင်ကိုက်တာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ငှက်ပျောရွက်ကြိတ်ရည်ကို ပျားရည်နဲ့ရောစပ်ပြီး အနာကိုလူးပေးလို့ရပါတယ်။ ငှက်ပျောရွက်ကို ရေစင်အောင်ဆေးပေးပြီး အနာပေါ်မှာ ကပ်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။
ခံတွင်းထဲကအနာတွေ သက်သာစေဖို့အတွက်လည်း ငှက်ပျောရွက်ကို အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။ နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ ငှက်ပျောရွက်က ခံတွင်းအနာတွေကို သိသိသာသာသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ငှက်ပျောရွက်ကို အခြောက်ခံလို့ အမှုန့်ကြိတ်ပြီး ပျားရည်လေးနဲ့ရောလို့ အစားမစားခင်စားပေးပါ။
နာတာရှည်ဝမ်းချုပ်တာကိုသက်သာစေနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ဝမ်းပျော့ပျော့သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ငှက်ပျောရွက်တင် မဟုတ်ပါဘူး။ ဝမ်းမှန်စေဖို့အတွက်လည်း စားသုံးပေးလို့ရပါတယ်။ ငှက်ပျောရွက်ကို ပြုတ်ပြီး ပြုတ်ရည်ကိုသောက်ပေးပါ။ ငှက်ပျောရွက်၊ ရှောက်ရွက်ကိုအခြောက်ခံလို့ အမှုန့်ကြိတ်ပြီး ဆတူရောပါ၊ ရေဆူဆူထဲကို အမှုန့်တွေကိုထည့်ပြီး ၅ မိနစ်က နေ ၁၀ မိနစ်လောက်အထိထားပေးပါ။ ဒီအရည်ကိုသောက်သုံးတာက အစာအိမ်နာတာကိုပါသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ အစာခြေစနစ်ကိုလည်း ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။
ငှက်ပျောရွက်က သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ ငှက်ပျောရွက်ပြုတ်ရည်ကို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် ပုံမှန်သောက်သုံးပေးသူတွေက သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကျဆင်းတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ သွေးတွင်းကိုလက်စထရောများသူတွေအတွက် စားသုံးပေးသင့်တဲ့ သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်တစ်မျိုးပေါ့။
သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေမှာပျော်ဝင်လွယ်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်က သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ကျဆင်းစေနိုင်သလို ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်စုပ်ယူမှုကိုလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးအစား -၂ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့ ငှက်ပျောရွက်ပြုတ်ရည်ကို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သောက်သုံးပေးတာက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုကျဆင်းစေနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။
“ဒီပို့လျကိုတှတေဲ့ သူငယျခငျြး မိတျဆှမြေားအားလုံး မြားမြားလေးရှဲယျပေးကွပါ”
ဒီပို့လ်ကိုတွေ့တဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများအားလုံး များများလေးရှဲယ်ပေးကြပါ
ကိုယ့်ရှဲယ် လိုက်လို့ လူတစ်ယောက်ကျန်းမာရေးကောင်းသွားမယ်ဆိုရင် ကုသိုလ်အများကြီးရပါတယ်
အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ အရွက်က ဗီးစပ်ရွက်လို့ ခေါ်ပါတယ် တချို့တွေက ဘိဇာရွက် – ဂျာမနီရွက် လို့လည်းခေါ်ပါတယ် လမ်းဘေးတွေမှာအများကြီးပေါက်ပါတယ်
အဲဒီအရွက်ကို ရေဆေးဆား လေးနည်းနည်းထည့်ပြီးငရုပ်ဆုံ နဲ့ အရည်ထွက်အောင်ထောင်းပါ
အဲဒီ အရည် ဖန်ခွက်နဲ့ လက်တစ်လုံးလောက်ကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် ပုံမှန်သောက်ပေးရုံနဲ အာခေါင်နဲ့ လည်ချောင်းမှာရှိတဲ့ ပိုးတွေကိုသေစေနိုင်ပါတယ်
ရောဂါပိုးရှိတဲ့လူနဲ့ ထိစပ်မှုရှိတဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကို သံသယ ရှိတဲ့ သူတွေ ၃ ရက် လောက် ပုံမှန်သောက်ပေးပါ အဆုတ်ထဲထိ ပိုးမရောက်သေးဘူးဆိုရင် သေချာပျောက်ပါတယ်
ဆေးမျိုချရတာ အနံနည်းနည်းဆိုးပေမဲ့ ကျန်းမာရေးက ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်
ဒီပို့လျကိုတှတေဲ့ သူငယျခငျြး မိတျဆှမြေားအားလုံး မြားမြားလေးရှဲယျပေးကွပါ
ကိုယျ့ရှဲယျ လိုကျလို့ လူတဈယောကျကနျြးမာရေးကောငျးသှားမယျဆိုရငျ ကုသိုလျအမြားကွီးရပါတယျ
အခုကြှနျတျောပွထားတဲ့ အရှကျက ဗီးစပျရှကျလို့ ချေါပါတယျ တခြို့တှကေ ဘိဇာရှကျ – ဂြာမနီရှကျ လို့လညျးချေါပါတယျ လမျးဘေးတှမှောအမြားကွီးပေါကျပါတယျ
အဲဒီအရှကျကို ရဆေေးဆား လေးနညျးနညျးထညျ့ပွီးငရုပျဆုံ နဲ့ အရညျထှကျအောငျထောငျးပါ
အဲဒီ အရညျ ဖနျခှကျနဲ့ လကျတဈလုံးလောကျကို တဈနေ့ နှဈကွိမျ ပုံမှနျသောကျပေးရုံနဲ အာခေါငျနဲ့ လညျခြောငျးမှာရှိတဲ့ ပိုးတှကေိုသစေနေိုငျပါတယျ
ရောဂါပိုးရှိတဲ့လူနဲ့ ထိစပျမှုရှိတဲ့သူတှကေိုယျ့ကိုယျကို သံသယ ရှိတဲ့ သူတှေ ၃ ရကျ လောကျ ပုံမှနျသောကျပေးပါ အဆုတျထဲထိ ပိုးမရောကျသေးဘူးဆိုရငျ သခြောပြောကျပါတယျ
ဆေးမြိုခရြတာ အနံနညျးနညျးဆိုးပမေဲ့ ကနျြးမာရေးက ပိုပွီးအရေးကွီးပါတယျ
“လူတိုငျး တဈသကျလုံး အသုံးဝငျမယျ့.. ဆေးနညျးတို မှတျစု ၄၅နညျး”
-ပါးစပ် နှုတ်ခမ်း တို့၌ ရေယုံပေါက်လေးညုင်းပွင့်သွေးလိမ်း
-ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော အားကုန်ခမ်းဧကရာဇ်မြစ်ကို ဆန်ဆေးရေ နဲ့ သွေးသောက် – မကျီးခေါက်သွေးသောက်
-မုတ္တယောင် (ဝှေးဥယောင်)ကျဆေးဝက်ကြိမ်ရွက်နဲ့ဆနွင်းစိမ်းတက် ရော ထောင်း အုံ၍ပတ်တီးစည်း ရေဆွတ်ဆွတ်ပေး
-နှလုံးရောဂါ ရုတ်တရက် မော ကြပ် အောင့်
-အိမ်မပျော်လျှင်ဒန်ကျွဲပင်ပြုပ်သောက် မဲဇလီရွက်ဟင်းချိုချက်သောက် လက်သုတ် သုတ်စား
-ကင်းကိုက် အဆိပ်အတောက် ကျောက်ချဉ်သွေးလိမ်း
-သွေးပျစ် သွေးခဲလွန်းလျှင်ရှောက်ရည် သံပုရာရည် တစ်ဝသောက် ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်ကြမ်းကျကျကြိုသောက်
ကျောက်ကလေးများကို မြေအိုးထဲထည့်၍လှော်(မီးမကျွမ်းစေရ) နီရဲလာလျှင်သံပုရာရည်နဲ့ပက်ဖျန်း(သို့)သံပုရာရည်ထဲသို့သွန်ထည့် ကြေမွသွားသော ကျောက်မှုန့်များကို ချင့်ချိန်သောက်
-ရင်ပြည့်အစာမကျေ လေးလံ အဝလွန် အကြောတက် အဆီကျဆေး
လေးတူဆတူကျိုသောက် (၆ ပါးဆေး)
-ချောင်းဆိုးလျှင်….ခရေပွင့်ကိုတညလုံးရေစိမ်၊ နံနက်တွင် ထိုရေကိုစစ်၍သောက်ပါ ၊ပျောက်၏ ။
-ရင်ပြည့်ရင်ကယ် ..ကြက်ဟင်းခါးသက်စောင့်ဆေးကို နှမ်းဆီ –ပရုပ်ဆီဖြူ ဖြင့်ဖျော်၍ ရင်မှအသာအယာသပ်ချပါ ။
-နှာပိတ်သော်…..ကြိတ်မှန်ရွက် ခွေးသေးပန်းရွက် နှစ်ပါးကြိတ် ၊ ရှိန်းခိုနဲနဲထည့် ၊ ငယ်ထိပ်မှနှာခေါင်းအထိဆေးအရည်နှင့်ဆွဲပေးပါ ။
-တက်လျှင်….ဆင်ငိုမြက်ပြုပ်ရည်ကိုတိုက်ပါ ။ အတက်ချက်ချင်းကျသွားမည် ။
-ရေငတ်ဝမ်းကျ …..ဆီးသီးအစေ့အတွင်းမှအဆန်ကို အမှုန့်ပြု၍ နွယ်ချိုနှင့်ရောပြီးစားပေးပါ ။
-ကင်းထိုးသော်…….ကင်းကိုက် ကင်းထိုး ဒဏ်ရာ ငဖြူကြီးမြစ်သွေးလိမ်းပါ ။
-ကြို့ထိုးလျှင်……ကြက်သွန်းနီကိုထန်းလျှက်နှင့်နိုင်းချင်း ကြိတ်၍စား ။
-ခရုသင်း…..ကျည်းသီးဆန်ကိုဆန်ဆေးရည်နှင့်တွဲစပ်၍ ရက်ပေါင်းများစွာစားရပါသည် ။
-ခါးနာ ခါးကိုက်……ညောင်ခြေထောက်ပင်၏ နို့စေးရည်လိမ်းပေးပါ ။
-ငှက်ဖျားထလျှင် ….မြင်းခွာရွက်ရည်ကို ငရုပ်ကောင်းနှင့်အမျှစီကြိတ်၍ သောက်ပါ ။
-ခေါင်းတခြမ်းကိုက်လျှင်…….ကျည်းသီးဆန်ကို ဆိတ်ကျင်ငယ်ရည်နှင့်သွေးလိမ်းပေးပါ ။
-စကားထစ်လျှင်. . နံနက်တိုင်းမြင်းခွာရွက် တစ်ရွက်နှစ်ရွက်လောက် နေ့စဉ်စားပေးပါ ။
-စအိုယားနာ….ကြိတ်မှန်ရွက် အရည်ညှစ်၍စအိုဝတွင် သုံးလေးကြိမ်သုပ်လိမ်းပေးပါ ၊ ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများကျဆင်းလာပါလိပ်မည် ။
-ဆီးခြုပျလြှငျ….ငုပငျ၏ အနှဈိုကိုသှေး၍ ခကျြအောကျမကွာခဏ လိမျးပေးပါ ။
-ဆီးတစက်စက်ကျလျှင်…ကြက်သွန်နီကိုပြုပ်၍ အရည်ကိုသောက်ပေးပါ ။
-ဆီးချုပ်လျှင် ……ဆီးများစေရန် ကြက်သွန်နီ အစိမ်းများများ စားပေးပါ ။
-ဆီးအောင့်ကျောက်တည်လျှင်……ကြာဟင်းရွက်ကိုနွားနို့ နှင့်သကြားရော၍ နေ့စဉ်စားပေးပါ ။
-ဆီးချိုဖြစ်လျှင် ….ခံတက်ခေါက်ကို လေးခွက်တစ်ခွက်တင်ကျို၍ သောက်ပါ ။
-ဆီးအနှစ်ကျလျှင်…..သင်္ဘော ရွက် သုံးရွက်ကိုထန်းလျက် သုံးခဲ ၊ဆားအနည်းငယ် ထည့် ၊ သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကျို၊ တနေ့လုံးသောက်ပေးပါ ။
-ဆီးပူလျှင်….ဆီးသွားသောအခါ ပူလိုက်တာ စားပါ ဗူးသီးပြုတ်။
-ဆံပင်ပြန်ပေါက်ဆေး……သံပုရာစေ့ကိုရေနှင့်ကြိတ် ၊ နေ့စဉ်ဆံပင်ကိုလိမ်းပေးပါ ၊ ဆံပင်ပြန်ပေါက်၏
-တင်းတိပ်….နနွင်းနှင့် ငဖြူကြီးအစေးကိုသွေးလိမ်းပေးပါ ။
-ဓာတ်ချုပ်လျှင် ……ထန်းလျက်နဲ့မန်ကျီး ကို ဆားမြတ်မြတ်ထည့်၍ တည်ပြီးစားလျှင် ဝမ်းသက် ဝမ်းမှန်၏ ။
-နားကိုက်လျှင်…..ကြက်သွန်နီကိုမီးဖုတ် ၊ အရည်နွေးနွေးနားထဲထည့် နားကိုက်ခြင်းပျောက်၏ ။
-နားအူ နားလေထွက်လျှင်….သဘောင်္ရွက် မီးအုံး၍ အတို့အမြှုပ်လုပ်စားပေးပါ ။
-နားအတွင်းပိုးကောင်ဝင်လျှင်….ခရမ်းကစော့သီးကိုမီးရှို့ပြီး အခိုးခံ မုန်ညင်းဆီနှင့်နားကိုကျပ်ပေးပါ ။
-နို့ကြောင်းပိတ်လျှင်….ကြိတ်မှန်ရွက်ကို ငါးကြင်းသားကင်နဲ့ ချက်စားပေးပါ ။
-နှလုံးရောဂါဖြစ်လျှင်.. ခရေပင်၏အခေါက်ပြုတ်ရည်ကို သောက်ပါ ၊ အပွင့်ကိုရှူ ၊အသီးကို စားပေးပါ အမြစ်ပြတ်ပျောက်၏ ။
-နှခေါင်းသွေးလျှံလျှင်……ငှက်ပျောပင်မှ ထွက်သော အစေးကို ရှူပေးပါ ။
-နှာခေါင်းအနံ့ မရသောရောဂါ ဖြစ်လျှင်. … ကြိတ်မှန်ရွက် ညှစ်၍ရသောအရည်ကို ခဏ ခဏရှူပေးပါ ။ဆေးနည်း ၁၀၀၀ စာအုပ်မှ ကူးယူမျှဝေသည်။
အနာနဲ့ဆေးတွေ့ကြပါစေ မေတ္တာများစွာဖြင့်………ရှယ်ယူထားလို့ ပိုနေတယ်မရှိပါ။
-ပါးစပျ နှုတျခမျး တို့၌ ရယေုံပေါကျလေးညုငျးပှငျ့သှေးလိမျး
-ဝမျးပကျြ ဝမျးလြှော အားကုနျခမျးဧကရာဇျမွဈကို ဆနျဆေးရေ နဲ့ သှေးသောကျ – မကြီးခေါကျသှေးသောကျ
-မုတ်တယောငျ (ဝှေးဥယောငျ)ကဆြေးဝကျကွိမျရှကျနဲ့ဆနှငျးစိမျးတကျ ရော ထောငျး အုံ၍ပတျတီးစညျး ရဆှေတျဆှတျပေး
-နှလုံးရောဂါ ရုတျတရကျ မော ကွပျ အောငျ့
-အိမျမပြျောလြှငျဒနျကြှဲပငျပွုပျသောကျ မဲဇလီရှကျဟငျးခြိုခကျြသောကျ လကျသုတျ သုတျစား
-ကငျးကိုကျ အဆိပျအတောကျ ကြောကျခဉျြသှေးလိမျး
-သှေးပဈြ သှေးခဲလှနျးလြှငျရှောကျရညျ သံပုရာရညျ တဈဝသောကျ ကငျပှနျးခဉျြရှကျကွမျးကကြကြွိုသောကျ
ကြောကျကလေးမြားကို မွအေိုးထဲထညျ့၍လှျော(မီးမကြှမျးစရေ) နီရဲလာလြှငျသံပုရာရညျနဲ့ပကျဖနျြး(သို့)သံပုရာရညျထဲသို့သှနျထညျ့ ကွမှေသှားသော ကြောကျမှုနျ့မြားကို ခငျြ့ခြိနျသောကျ
-ရငျပွညျ့အစာမကြေ လေးလံ အဝလှနျ အကွောတကျ အဆီကဆြေး
လေးတူဆတူကြိုသောကျ (၆ ပါးဆေး)
-ခြောငျးဆိုးလြှငျ….ခရပှေငျ့ကိုတညလုံးရစေိမျ၊ နံနကျတှငျ ထိုရကေိုစဈ၍သောကျပါ ၊ပြောကျ၏ ။
-ရငျပွညျ့ရငျကယျ ..ကွကျဟငျးခါးသကျစောငျ့ဆေးကို နှမျးဆီ –ပရုပျဆီဖွူ ဖွငျ့ဖြျော၍ ရငျမှအသာအယာသပျခပြါ ။
-နှာပိတျသျော…..ကွိတျမှနျရှကျ ခှေးသေးပနျးရှကျ နှဈပါးကွိတျ ၊ ရှိနျးခိုနဲနဲထညျ့ ၊ ငယျထိပျမှနှာခေါငျးအထိဆေးအရညျနှငျ့ဆှဲပေးပါ ။
-တကျလြှငျ….ဆငျငိုမွကျပွုပျရညျကိုတိုကျပါ ။ အတကျခကျြခငျြးကသြှားမညျ ။
-ရငေတျဝမျးကြ …..ဆီးသီးအစအေ့တှငျးမှအဆနျကို အမှုနျ့ပွု၍ နှယျခြိုနှငျ့ရောပွီးစားပေးပါ ။
-ကငျးထိုးသျော…….ကငျးကိုကျ ကငျးထိုး ဒဏျရာ ငဖွူကွီးမွဈသှေးလိမျးပါ ။
-ကွို့ထိုးလြှငျ……ကွကျသှနျးနီကိုထနျးလြှကျနှငျ့နိုငျးခငျြး ကွိတျ၍စား ။
-ခရုသငျး…..ကညျြးသီးဆနျကိုဆနျဆေးရညျနှငျ့တှဲစပျ၍ ရကျပေါငျးမြားစှာစားရပါသညျ ။
-ခါးနာ ခါးကိုကျ……ညောငျခွထေောကျပငျ၏ နို့စေးရညျလိမျးပေးပါ ။
-ငှကျဖြားထလြှငျ ….မွငျးခှာရှကျရညျကို ငရုပျကောငျးနှငျ့အမြှစီကွိတျ၍ သောကျပါ ။
-ခေါငျးတခွမျးကိုကျလြှငျ…….ကညျြးသီးဆနျကို ဆိတျကငျြငယျရညျနှငျ့သှေးလိမျးပေးပါ ။
-စကားထဈလြှငျ. . နံနကျတိုငျးမွငျးခှာရှကျ တဈရှကျနှဈရှကျလောကျ နစေ့ဉျစားပေးပါ ။
-စအိုယားနာ….ကွိတျမှနျရှကျ အရညျညှဈ၍စအိုဝတှငျ သုံးလေးကွိမျသုပျလိမျးပေးပါ ၊ ဝမျးတှငျးရှိ ပိုးမြားကဆြငျးလာပါလိပျမညျ ။
-ဆီးခွုပလြွှငြ….ငုပငြ၏ အနှဈိုကိုသှေး၍ ခကွအြောကမြကှာခဏ လိမြးပေးပါ ။
-ဆီးတစကျစကျကလြှငျ…ကွကျသှနျနီကိုပွုပျ၍ အရညျကိုသောကျပေးပါ ။
-ဆီးခြုပျလြှငျ ……ဆီးမြားစရေနျ ကွကျသှနျနီ အစိမျးမြားမြား စားပေးပါ ။
-ဆီးအောငျ့ကြောကျတညျလြှငျ……ကွာဟငျးရှကျကိုနှားနို့ နှငျ့သကွားရော၍ နစေ့ဉျစားပေးပါ ။
-ဆီးခြိုဖွဈလြှငျ ….ခံတကျခေါကျကို လေးခှကျတဈခှကျတငျကြို၍ သောကျပါ ။
-ဆီးအနှဈကလြှငျ…..သင်ျဘော ရှကျ သုံးရှကျကိုထနျးလကျြ သုံးခဲ ၊ဆားအနညျးငယျ ထညျ့ ၊ သုံးခှကျတဈခှကျတငျကြို၊ တနလေုံ့းသောကျပေးပါ ။
-ဆီးပူလြှငျ….ဆီးသှားသောအခါ ပူလိုကျတာ စားပါ ဗူးသီးပွုတျ။
-ဆံပငျပွနျပေါကျဆေး……သံပုရာစကေို့ရနှေငျ့ကွိတျ ၊ နစေ့ဉျဆံပငျကိုလိမျးပေးပါ ၊ ဆံပငျပွနျပေါကျ၏
-တငျးတိပျ….နနှငျးနှငျ့ ငဖွူကွီးအစေးကိုသှေးလိမျးပေးပါ ။
-ဓာတျခြုပျလြှငျ ……ထနျးလကျြနဲ့မနျကြီး ကို ဆားမွတျမွတျထညျ့၍ တညျပွီးစားလြှငျ ဝမျးသကျ ဝမျးမှနျ၏ ။
-နားကိုကျလြှငျ…..ကွကျသှနျနီကိုမီးဖုတျ ၊ အရညျနှေးနှေးနားထဲထညျ့ နားကိုကျခွငျးပြောကျ၏ ။
-နားအူ နားလထှေကျလြှငျ….သဘောင်ျရှကျ မီးအုံး၍ အတို့အမွှုပျလုပျစားပေးပါ ။
-နားအတှငျးပိုးကောငျဝငျလြှငျ….ခရမျးကစော့သီးကိုမီးရှို့ပွီး အခိုးခံ မုနျညငျးဆီနှငျ့နားကိုကပျြပေးပါ ။
-နို့ကွောငျးပိတျလြှငျ….ကွိတျမှနျရှကျကို ငါးကွငျးသားကငျနဲ့ ခကျြစားပေးပါ ။
-နှလုံးရောဂါဖွဈလြှငျ.. ခရပေငျ၏အခေါကျပွုတျရညျကို သောကျပါ ၊ အပှငျ့ကိုရှူ ၊အသီးကို စားပေးပါ အမွဈပွတျပြောကျ၏ ။
-နှခေါငျးသှေးလြှံလြှငျ……ငှကျပြောပငျမှ ထှကျသော အစေးကို ရှူပေးပါ ။
-နှာခေါငျးအနံ့ မရသောရောဂါ ဖွဈလြှငျ. … ကွိတျမှနျရှကျ ညှဈ၍ရသောအရညျကို ခဏ ခဏရှူပေးပါ ။ဆေးနညျး ၁၀၀၀ စာအုပျမှ ကူးယူမြှဝသေညျ။
အနာနဲ့ဆေးတှကွေ့ပါစေ မတ်ေတာမြားစှာဖွငျ့………ရှယျယူထားလို့ ပိုနတေယျမရှိပါ။
“ဆီး ခြိုနဲ့ သှေးတိုး လကျတှရေ့ောဂါပြောကျဆေးနညျး”
လူလေး အမေရဲ့ ရောဂါ ဆီးချို သွေးတိုး တို့ကို ဗမာတောကြက်ဥနဲ့
၁ ။ ကြက်ဥနှစ်လုံး (တောကြက်ဥ)
၂ ။ ရှားဇောင်းလက်တထွာလောက် ကြက်ဥအနှစ်ကိုမသုံးရ အရည်ကြည်ကိုသာသုံးရန်
အင်္ဂလိပ်ဆေးသောက်ထားလျှင် (၃ )နာရီခြား သောက်ပါ
၁ပတ်ကို (၂ )ခါသောက်ရင်သိသာပါမယ်။ လက်ဆင့်ကမ်းပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါ…။
လူလေး အမရေဲ့ ရောဂါ ဆီးခြို သှေးတိုး တို့ကို ဗမာတောကွကျဥနဲ့
၁ ။ ကွကျဥနှဈလုံး (တောကွကျဥ)
၂ ။ ရှားဇောငျးလကျတထှာလောကျ ကွကျဥအနှဈကိုမသုံးရ အရညျကွညျကိုသာသုံးရနျ
အင်ျဂလိပျဆေးသောကျထားလြှငျ (၃ )နာရီခွား သောကျပါ
၁ပတျကို (၂ )ခါသောကျရငျသိသာပါမယျ။ လကျဆငျ့ကမျးပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါ…။